FastNewsNepal | नौ महिनापछिको फ्राइडे रिलिज : कतै हल बन्द निर्देशन त कतै शून्य दर्शक
नौ महिनापछिको फ्राइडे रिलिज : कतै हल बन्द निर्देशन त कतै शून्य दर्शक
२०७७ पुष ११, शनिबार ०२:५२
काठमाडौं : फागुन ८ गतेदेखि ठप्प सिनेमाघरहरू शुक्रवारबाट खुले। सरकारको तर्फबाट फिल्म क्षेत्र खुलाउने अनुमति कुर्दाकुर्दा हैरान भएपछि हल संचालकहरु विद्रोहका साथ उत्रेका हुन्। नेपाल चलचित्र संघको नेतृत्वमा सरकारलाई सांकेतिक दवाव स्वरुप सिनेमाघर खुला गरिएको हो।
प्रदर्शन प्रभावित नेपाली फिल्महरू ‘आमा’ र ‘सेन्टिभाइरस’ काठमाडौं भित्र र बाहिरका हलहरूमा देखाइयो। तर, नौ महिनापछि पुन: सुरु गरिएको ‘फ्राइडे रिलिज’को ट्रेन्ड सहज भने रहेन।
सरकारले अनुमति नदिँदै हल सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले लबिम मलस्थित क्युएफएक्समा सिनेमा बन्द गर्न निर्देशन दियो। सरकारले अनुमति नदिएका क्षेत्र खुला गर्न नमिल्ने भन्दै हल बन्द गर्न लगाएको ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए।
क्यूएफएक्स सिनेमाका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख रोशन अडिगाले प्रशासनको निर्देशनलाई आफ्नो दवावको परिणाम भएको संज्ञा दिए। ‘सरकारले सञ्चालन अनुमति नदिँदा हामी मारमा परेका छौं। सांकेतिक विरोध स्वरुप फिल्म प्रदर्शनमा ल्याउँदा हामीलाई व्यवसायिक फाइदा हुने होइन। तर पनि दवाव दिइयो,’ उनले भने।
कस्तो रह्यो त पहिलो दिन हलको व्यापार?
रोशन अडिगाका अनुसार सिभिल मल, लाबिम मल र छायाँ सेन्टरका हलहरूमा दुई नेपालीसँगै हलिउड फिल्महरू ‘ब्लडसट’ र ‘द इन्भिजिवल म्यान’को प्रत्येक शोमा १० देखि १५ जनाको उपस्थिति रह्यो। महामारीबीच दर्शक फिल्म हेर्न आउनुलाई सकारात्मक संकेत मान्छन् उनी।
‘हामीले व्यापार गर्न हल खोलेका होइनौं। फिल्म क्षेत्रमा पनि सरकारको आँखा पर्छ कि भनेर दवाब दिएका हौं। पहिलो दिननै हल बन्द गराउन दवाव दिनुको अर्थ अब केही सोच्छन् कि?,’ उनी आशावादी सुनिए।
त्यस्तै, क्यूज सिनेमाले भने दुई नेपाली फिल्मको मात्र शो राखेको थियो। तर, शुक्रवार दिनभर कुनै पनि शोका लागि दर्शकको उपस्थित भएनन्। क्यूज सञ्चालक सुमित मैनालीका अनुसार शनिवारदेखि क्यूज सिनेमामा दुई हलिउड फिल्म समेत प्रदर्शन हुँदैछ।
‘स्वास्थ्य सुरक्षाका कारण दर्शक तत्काल फर्कन डराउनु भएको हो। त्यही डर भगाउन र सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन पनि बिस्तारै यस क्षेत्र चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ मैनालीले भने।
उता केएल टावरस्थित एफक्युबमा भने ‘सेन्टिभाइरस’का लागि १५ जनासम्म दर्शक उपस्थित रहेको व्यवस्थापक राजन थापा मगरले जानकारी दिए। ‘प्रत्येक शोमा १० देखि १५ जनाले हेर्नु भएको छ। भोलिदेखि दर्शक बढ्दै जान्छन् होला,’ उनले भने।
सांकेतिक विरोधले गरायो सीडीओको ध्यानाकर्षण
शुक्रवार हल सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल चलचित्र संघलाई बैठकका लागि डाकेको छ। सिनेमाघर सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले पहिलोपोस्टलाई बताए।
‘सीसीएमसीको बैठकसम्म यस विषयलाई पुर्‍याउनका निम्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस आवश्यक रहेछ। आज हामीलाई सिफारिस दिइयो,’ प्रधानले जानकारी दिए।
सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् माग सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्ने र आफूहरूले सिनेमा हल सञ्चालनलाई पनि निरन्तरता दिने उनले बताए। भने, ‘हाम्रो सांकेतिक आन्दोलन जारी रहन्छ। यो फिल्म क्षेत्रमाथि गरिएको अन्याय हो। त्यसैले दवाव दिइरहन्छौं।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सकारात्मक भएकाले चाँडै माग सम्बोधन हुने आशा व्यक्त गरे।
‘सरकारले हल खोल्न अनुमति दिएपछि बन्द गर्न भन्ने छैनौं,’ सहायक प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘यस्तो निर्देशन नआउन्जेल हल खोल्न मिल्दैन।’
सलमान खानले आफ्नो फिल्म जि स्टुडियोजलाइ २ सय ३० करोडमा बेचे
किन आउदैनन भारतिय सेलिब्रेटी नेपाल?
नेपाली चेली बिस्वको प्रभाबशाली महिलाको सुचिमा पर्न सफल
अजय देबगनले अमिताभ र रकुलप्रीत संगै काम गर्दै